(L) Dopamine သည်သင့်အားသတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေခြင်းကိုစွဲလမ်းစေသည် (၂၀၀၉) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
သင်ကလူတွေကအကြောင်းသိထားသင့် 100 အရာ: #8 - Dopamine သတင်းအချက်အလက်ရှာဖို့အတွက်သင်ကစွဲကို
By Susan Weinschenk ဖြစ်သည် on နိုဝင်ဘာလ 7, 2009 in ဦးနှောက်
စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုခလုတ် dopamine လွှတ်ရာခန့်မှန်းရခက်ပါသလား
သငျသညျအီးမေးလ်ပို့သို့မဟုတ် twitter သို့မဟုတ်စာတိုပို့စွဲနေကြသည်ကဲ့သို့သင်တို့အစဉ်အဆက်ခံစားရပါသလော သင် Inbox ထဲတွင်မက်ဆေ့ခ်ျရှိပါတယ်သိမြင်လျှင်မဖြစ်နိုင်သင့်အီးမေးလ်ကိုလျစ်လျူရှုဖို့ရှာရမလဲ? သငျသညျအစဉျအမွဲနောက်ပိုင်းတွင်သင်ဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာလှည့်ပတ်ရှာဖွေနေပါတယ်သဘောပေါက်, သင်ယခုမတိုင်မီထက်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေနေကြသည်အချို့သောသတင်းအချက်အလက်နှင့် 30 မိနစ်ဖွင့်ကြည့်ဖို့ Google ကသွားပြီပြီလော ဤရွေ့ကားအလုပ်မှာသင့် dopamine စနစ်၏အားလုံးနမူနာဖြစ်ကြသည်။
dopamine Enter - Neuro သိပ္ပံပညာရှင်များသူတို့တစ်တွေစဉ်များအတွက် dopamine system ကိုမခေါ်အဘယ်အရာကိုလေ့လာနေပါပြီ။ Dopamine Arvid Carlsson နှင့်ဆွီဒင်အမျိုးသားနှလုံးဌာန Institute မှာ Nils-Ake Hillarp အားဖြင့် 1958 ထဲမှာ "ရှာဖွေတွေ့ရှိ" ခံခဲ့ရသည်။ Dopamine ကဦးနှောက်၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဖန်တီးနဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်အပါအဝင်ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာအမျိုးမျိုးအတွက်အရေးပါသည်ကိုပြောင်းရွှေ့, အိပ်ပျော်နေသော, ခံစားချက်, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု, ရှာကြံနှင့်ဆုလာဘ်သည်။
အဆိုပါဒဏ္ဍာရီ ကြောင်း dopamine သင်သည်ထို့ကြောင့်ခံစား, အပျော်အပါးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာ, လိင်နှင့်မူးယစ်ဆေးအဖြစ်အချို့သောအပြုအမူတွေကိုထွက်ရှာအံ့သောငှါသငျသညျလှုံ့ဆျောခံစားရစေသည်: - သင်က dopamine ဦးနှောက်၏ "အပျော်အပါး" စနစ်များကိုထိန်းချုပ်ကြောင်းကြားသိကြပေမည်။
ဒါဟာအားလုံးရှာကြံအကြောင်းကိုဖွင့် - နောက်ဆုံးပေါ်သုတေသနသော်လည်းဤအမြင်ကိုပြောင်းလဲနေပါတယ်။ အဲဒီအစားကျွန်တော်တို့ကိုပျော်မွေ့တွေ့ကြုံခံစားဖို့ဖြစ်စေတဲ့ dopamine ၏, နောက်ဆုံးပေါ်သုတေသန dopamine အကြောင်းတရားများအပြုအမူရှာကြံကြောင်းပြသထားတယ်။ Dopamine, လိုခငျြလိုဆန္ဒထွက်မရှာ, ရှာဖွေရန်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါဟာ arousal ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယေဘုယျအဆင့်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတိုးပွားစေပါသည်။ (တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် Stand-အမှတ် မှစ. ဒီအရေးကြီးသည်။ system ကိုရှာကြံအဆိုပါ dopamine, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးတဆင့်ရွှေ့သင်ယူနှင့်ဆက်လက်ရှင်သန်ရန်လှုံ့ဆော်မှုကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်) ။ ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိုကဲ့သို့သောအစားအစာအဖြစ်လိုအပ်ချက်, ဒါမှမဟုတ်လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့, ဒါပေမယ့်လည်းစိတ္တဇသဘောတရားများအကြောင်းကိုပဲမဟုတ်ပါဘူး။ Dopamine စိတ်ကူးများနှင့်လောင်စာသတင်းအချက်အလက်ဘို့ငါတို့ရှာဖွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုစပ်စုစေသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်သုတေသနကိုပျော်မွေ့ခံစားမိစေသည်သော opioid စနစ် (dopamine ကနေခွဲထုတ်) ကြောင်းပြသထားတယ်။
အကြိုက် vs. လိုသော - Kent Berridge အဆိုအရ, ဤနှစ်ခုစနစ်များ, သည် "လို" (dopamine) နှင့် "ကဲ့သို့" (opioid) ဖြည့်စွတ်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါလိုသောစနစ်ကအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှကျွန်တော်တို့ကို propels နှင့်အကြိုက်စနစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျေနပ်မှုခံစားရထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာခေတ္တရပ်တန့်ပြီးစေသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာခဏအနည်းဆုံးပိတ်ထားသည်မဟုတ်လျှင်, ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးအဆုံးမဲ့ကွင်းဆက်ထဲမှာ run ဖို့စတင်ပါ။ နောက်ဆုံးပေါ်သုတေသန dopamine စနစ် opioid စနစ်ကထက်ပိုမိုအားကောင်းကြောင်းပြသထားတယ်။ ကျနော်တို့ (နောက်ကျောဆင့်ကဲဖို့ ... ရှာတဲ့စိတ်ကျေနပ်မှု stupor အတွက်န်းကျင်ထိုင်လျက်ထက်အသကျရှငျကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိသည်) ကြှနျုပျတို့ကျေနပ်မှုရှိပါသလဲထက်ပိုရှာကြာလော့။
တစ်ဦးက dopamine သွေးဆောင်ကွင်းဆက် - အင်တာနက်, Twitter နှင့်စာသားဖြင့်ယခုကြှနျုပျတို့ရှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒနီးပါးလက်ငင်းဆန္ဒပြည့်ရှိသည်။ ချက်ချင်းပဲသူတစ်ဦးဦးမှစကားပြောလိုပါသလား? စာသား Send နှင့်သူတို့တစ်တွေစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းတုံ့ပြန်ကြသည်။ သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုတက်ကြည့်ဖို့လိုပါသလား? ကိုယ့် Google မှာစရိုက်ပါ။ အဘယ်အရာကိုသင်၏မိတ်ဆွေများမှတက်များမှာအဘယ်အရာကိုမြင်သနည်း Twitter သို့မဟုတ် Facebook ကိုသွားပါ။ ကျနော်တို့ကွင်းဆက်သွေးဆောင်တစ် dopamine သို့ရ ... dopamine ပြီးတော့ငါတို့ကပိုရှာခြင်းငှါစေသည်ဖြစ်သောရှာဘို့ဆုခခြံရ, ရှာကြံကျွန်တော်တို့ကိုစတင်သည်။ ဒါဟာအီးမေးလ်ကိုကြည့်ရပ်တန့်ဖို့ခက်နှင့်ခက်ခဲဖြစ်လာသည်, စာပို့ရပ်တန့်ကျနော်တို့ကမက်ဆေ့ခ်ျကိုသို့မဟုတ်အသစ်စာသားကိုရှိပါကကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းစစ်ဆေးနေရပ်တန့်။
မျှော်လင့်ရတဲ့သူထက် သာ. ကောင်း၏ - ဦးနှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသုတေသနကျွန်တော်တို့ဟာတဦးတည်းရသည့်အခါထက်အကျိုးကိုကွိုတငျမျွောရသောအခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုပိုနှိုးဆွခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုပြသသောပြသထားတယ်။ ကြွက်အပေါ်သုတေသနသင် dopamine အာရုံခံကိုဖကျြဆီးပါလျှင်, ကြွက်, လမ်းလျှောက်ဝါးနှင့်မျိုပေမယ့်အစားအသောက်ဘေးမှာသူတို့ကိုရန်ဖြစ်ပါသည်အချိန်မှာတောင်ငတ်သေကြလိမ့်မည်နိုငျကွောငျးဖျောပွသညျ။ သူတို့ကအစာအာဟာရကိုရသွားကြဖို့ဆန္ဒဆုံးရှုံးခဲ့ရပါပြီ။
ပိုပြီးပိုပြီးပိုပြီး - related နေကြသည်လိုသောနဲ့အကြိုက်ဖြစ်သော်လည်း, သုတေသနကိုလည်း dopamine စနစ်က built-in မွတ်မပြေနိုင်သောရှိသည်ပါဘူးကွောငျးဖျောပွဒါဟာကျနော်တို့သတင်းအချက်အလက်များတွေ့ပြီအချိန်မှာတောင်ရှာကြံ "ပိုပြီးပိုပြီးပိုပြီး" ဟုကိုစောင့်ရှောက်ရန် dopamine စနစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ။ ကြောင်းမှာ google ရှာဖွေရေးစဉ်အတွင်းငါတို့သည်မူလကမေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေရှိသည်သောသိသော်လည်းငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့် ပို. ပို. ရှာနေရှာပါ။
ခန့်မှန်းရခက်သော့ချက်ဖြစ်ပါသည် - Dopamine လည်းခန့်မှန်းရခက်ခြင်းဖြင့်နှိုးဆွနေသည်။ တစ်ခုခုကြောင့်အတိအကျကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပျက်အခါ, သော dopamine system ကိုလှုံ့ဆော်။ ဤအအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကိရိယာများအကြောင်းစဉ်းစားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်များနှင့် Twitter နှင့်စာသားများပေါ်လာသော်လည်း, သူတို့သည်သို့မဟုတ်သောသူတို့သည်အနေဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မည်သည့်အခါကျနော်တို့အတိအကျမသိရပါဘူး။ ဒါဟာခန့်မှန်းရခက်ပါတယ်။ ဒါက dopamine system ကိုလှုံ့ဆော်အတိအကျအရာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာလောင်းကစားများနှင့်အထိုင်စက်များအတွက်အလုပ်မှာအတူတူပင် system ကိုပါပဲ။ ( "အဟောင်းကျောင်းကို" စိတ်ပညာရှင်နေသောဒီဖတ်နေသငျသညျမြားအဘို့, သင်သည် "variable ကိုအားဖြည့်အချိန်ဇယား" မှတ်မိစေနိုင်သည်။ Dopamine variable ကိုအားဖြည့်အချိန်ဇယားတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်။ ထိုအဒါအစွမ်းထက်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ) ။
သင်ကစာသားရှိသည်သော "ding" ကိုကြားရတဲ့အခါ - အ dopamine စနစ်သည်အကျိုးကိုလာမယ့်ကြောင်း "တွေကို" အထူးသဖြင့်အထိခိုက်မခံဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်သွားကြောင်းနေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြတဲ့သေးငယ်တဲ့, တိကျတဲ့ cue လည်းမရှိလြှငျ, သောငါတို့ dopamine system ကိုချွတ်သတ်မှတ်။ ဒါကြောင့် (အဲဒီမှာထဲကစိတ်ပညာရှင်များအတွက်: Pavlov မှတ်မိ) ကိုစွဲလမ်းအကျိုးသက်ရောက်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်တဲ့အသံကရသောအခါစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ရောက်ရှိ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအမြင်အာရုံ cue ရှိ၏အခါ။
140 ဇာတ်ကောင် ပို. ပင်စွဲလမ်းဖြစ်ပါသည် - ကမပြည့်ကွေနပျစေမနိုင်အောင်အတွက်လာမယ့်အချက်အလက်တွေကိုသေးငယ်သည်လာသောအခါထို dopamine system ကိုအများဆုံးအားကောင်းနှိုးဆွနေသည်။ တစ်ဦးကတိုတောင်းသောစာသားသို့မဟုတ် twitter (သာ 140 ဇာတ်ကောင်နိုင်ပါတယ်!) ထွက်ရှိသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ dopamine system ကိုဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်ပေးပို့ဖို့ကိုက်ညီနေသည်။
မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲ - ထို dopamine စနစ်၏ဒီစဉ်ဆက်မပြတ်ဆွကုန်ခမ်းတော့မှာနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့အဆုံးမဲ့ dopamine ကွင်းဆက်ထဲမှာဖမ်းမိတဲ့နေကြသည်။
မှတ်ချက်နှင့်ရှယ်ယာရေးရန် သင်တို့သည်ဤ dopamine ကွင်း၌၎င်း, သငျသညျသူတို့ကိုလှုံ့ဆော်ကြောင်း devices များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကဤစနစ်များအကြောင်းကိုသိကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်ထင်ရှိမရှိဖမ်းမိရရှိမရှိ။
Kent C. Berridge နှင့်တယ်ရီအီးရော်ဘင်ဆင်, ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲ: hedonic သက်ရောက်မှု, ဆုလာဘ်သင်ယူမှု, ဒါမှမဟုတ်မက်လုံးပေး salience ?: ဦးနှောက်သုတေသနဆန်းစစ်ချက်များ, 28, 1998 ။ 309-369 ။